Microsoft Mampiditra Add-ins ho an'ny Outlook amin'ny iOS | Vaovao IPhone
Microsoft dia mampiditra add-ins ho an'ny Outlook amin'ny iOS
Na dia maro aza ireo mpampiasa no tsy mihevitra ny Outlook ho iray amin'ireo rindranasa tsara indrindra hitantanana mailaka isan'andro, Microsoft dia manome antsika iray amin'ireo rindranasa tsara indrindra hanaovana an'izany, tsy tapaka manampy asa vaovao ary ambonin'izany rehetra izany fihainoana ireo mpampiasa hanatsara, hanova na hanampy fiasa vaovao, zavatra tokony ho feno fankasitrahana ary tsy zatra antsika i Apple. Vao avy nanavao ny Outlook nahatratra ny andiany 2.1 i Microsoft manampy ny famenoana izay ahafahantsika mamadika ny hafantsika ho fitaovana miasa nefa tsy mila manao dingana hafa eny an-dàlana izay mahatonga antsika tsy hamokatra intsony.
Ireo add-on ireo dia ahafahantsika mifampiresaka amin'ireo mailaka voarainay nefa tsy mamela ny fampiharana. Ohatra, amin'ny plugins Evernote sy Trello dia azontsika atao ny manampy ny atiny iray amin'ireo mailaka ireo amin'ny naoty na hafatra iray. Noho ny fampidirana amin'ny GIPHY dia afaka mamaly mailaka mivantana amin'ny GIF izay hotadiavinay amin'ity sehatra ity, rehetra nefa tsy manidy ny mailaka Outlook mailaka. Safidy iray hafa atolotry ny fanampim-panazavana eto amintsika ny fahafahan'ny fandikana mailaka mivantana noho ny Mpandika.
Amin'izao fotoana izao ny add-ons izay misy am-boalohany dia:
Ireo add-on rehetra ireo sy ireo ho avy dia hamonjy antsika fotoana betsaka isan'andro amin'ny resaka fitantanana mailaka, ka hahatonga an'i Outlook ho sehatra tsara indrindra hitantanana azy. Raha te hampihetsika ireo fanampiana izay ananantsika dia tsy maintsy mandeha any amin'ny Settings> Add-ons isika. Ny zavatra tokana ananan'ireny kojakoja ireny dia izao ilaina ny fananantsika famandrihana Office 365, famandrihana izay ilaina mandritra ny volana voalohany satria azo inoana fa hanafoana azy io i Microsoft rehefa mandeha ny fotoana, raha tsy rehefa mandeha ny fotoana, satria tsy vao sambany io fetra io dia voafetra ny safidin'ny mpamandrika Office 365 ary avy eo atolotra azy amin'ny afaka amin'ny mpampiasa rehetra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Microsoft dia mampiditra add-ins ho an'ny Outlook amin'ny iOS
Fitsarana vaovao manohitra an'i Apple, amin'ity indray mitoraka ity noho ny fandraisantsika ny FaceTime ao amin'ny iOS 6 hanery antsika hanavao ny iOS 7
Chrome for iOS dia nohavaozina manampy fanampiana ireo kaody QR